Nha Trang - आकर्षण
केन्द्रीय भियतनाममा नहा ट्रागको सानो पोर्ट शहर हो। यो ठाउँहरू र ऐतिहासिक स्थानहरूमा विशेष गरी धनी छैन। तर यहाँ मारिए, तपाईं निश्चित रुपमा केहि रोचक पाउनुहुनेछ। नाहा ट्रागमा, त्यहाँ पनि अनुभव गरिएको पर्यटक पनि केहि कुरा हो।
नाहा ट्रागमा आकर्षण
न्हा ट्रागमा चाम टावर
यो वियतनामी शहरको मुख्य आकर्षण हो। तिनीहरू7देखि 12 शताब्दी सम्मको अवधिमा बनाइएका थिए। मूलतः, आठ टावरहरू बनाइएको थियो, ठूलो चामको पावर र भव्य प्रतीकात्मक प्रतीक, तर तिनीहरूमध्ये चार मात्र यस दिनमा बाँचे। टावर्सहरू महान ऐतिहासिक मूल्यको हो, र इतिहासकारहरू र साधारण पर्यटकहरूको रुचिले बुझ्दैन। स्थानीय निवासीहरू प्रायः उनीहरूलाई देवी पो नगरमा प्रार्थना गर्न भेट्छन्। पुरातन परम्परा अनुसार यो देवीले मानिसहरूलाई कसरी चावल बढ्न सिकाउँछ।
न्हा ट्रागमा विनिपरल मनोरञ्जन पार्क
यदि तपाईं मनोरञ्जन पार्क भ्रमण गर्न निर्णय गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ सडक अविस्मरणीय हुनेछ। हान चे के किनारमा, जहाँ पार्क स्थित छ, समुद्री सतह मा स्थित सबैभन्दा लामो केबल कार को नेतृत्व गर्दछ। यसको लम्बाइ3किलोमिटर भन्दा बढी छ, र उचाइ 40 देखि 60 मीटर सम्म हुन्छ। तपाईं 12 मिनेटमा यस मार्गमा टापु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। Nha Trang मनोरञ्जन पार्कमा एक पानी पार्क, एक विशाल एक्वैरियम छ, जहाँ माछा र समुद्र जनावरहरु को धेरै प्रजातिहरु को प्रतिनिधित्व गरिन्छ, जो लामो सुरंग देखि प्रशंसा गर्न सकिन्छ। यहाँ तपाईं एक4डी सिनेमा, एक शानदार लेजर शो र अधिक जान्न सक्नुहुन्छ।
न्हा ट्राग मा लांग छोरा पागोडा
19औं शताब्दीको अन्तमा सुन्दर सुन्दर छोरा पागोडा बनाइएको थियो। 20 औं शताब्दीको सुरुमा, एक बलियो तूफानले यसलाई नष्ट गर्यो, तर पछि यो एक अलग, सुरक्षित ठाँउमा पुनर्निर्माण गरियो, जहाँ अहिले पनि आज अवस्थित छ। सन् 1963 मा, यो भवन अमेरिकाको प्रभुत्वको विरोध गर्ने भिक्षुहरूलाई समर्पित गरिएको थियो, जसले पहिलो वियतनामी राष्ट्रपतिको हरेक सम्भावनामा समर्थन गर्यो। पागोडा टॉवर नजिकै बुद्ध को एक सेतो प्रतिमा को नजिकै, एक कमल फूल मा बैठे। यो नहा ट्राङको कुनै पनि कुना बाट कहीं पनि हेर्न सकिन्छ। यो स्थान धेरै पर्यटकहरूको लागि तीर्थस्थानको स्थान हो।
Niangchang Oceanographic Museum
एक विशाल एक्वैरियममा, 23 टैंकहरू समावेश छन्, महासागरग्राफ संग्रहालय महासागर विज्ञान संस्थानको आधारमा स्थित छ, जुन 1923 देखि अवस्थित छ। तपाईले यसको परीक्षण गरी अविस्मरणीय छापहरू पाउनुहुनेछ। संग्रहालयमा प्रतिनिधित्व गरिएका समुद्री जीवका बासिन्दाहरूले तपाईंलाई तिनीहरूको विविधताको साथ आश्चर्यचकित गर्नेछन्। साथै, संग्रहालयमा तपाईंले समुद्री जहाजको 60 जना भन्दा बढी प्रजातिहरू देख्नुहुनेछ। संग्रहालयका हलहरूमा विशेष बैंकहरूमा धेरै भरी जनावरहरू, चराहरू, बिरुवाहरू, कोरहरू प्रतिनिधित्व हुन्छन्।
नहा ट्रागमा थर्मल स्प्रिंग्स
निस्सन्देह, नाहा ट्रागमा खनिज स्प्रिङहरू कुनै ऐतिहासिक मूल्य छैन। तर यदि तपाई दक्षिण भियतनाममा यस शहरमा आउनुभयो भने तपाईले स्थानीय थर्मल स्प्रिंग्सहरू भ्रमण गर्नुपर्छ। यहाँ एक सस्तो स्पा कम्प्लेक्स हो, पानी जुन एक प्राकृतिक वसन्त बाट 100 मीटर को गहराई देखि आउछ। यसले धेरै चिकित्सीय मिट्टी र स्पा प्रक्रियाहरु प्रदान गर्दछ, मस्तिष्कसुकैलीय प्रणाली, स्त्री रोग रोगहरु को रोगहरुमा उपयोगी। त्यस्ता प्रक्रियाहरू मात्र प्रतिरक्षालाई बलियो बनाउन अपरिवर्तनीय छन्। तपाईंको शरीर लामो विपरित कामका स्रोतहरूको भ्रमणमा प्रतिक्रिया दिनेछ।
न्हा ट्राग मा Zoclet समुद्र तट
र जब तपाईं ऐतिहासिक स्थानहरु को हलचल र हलचल देखि थकित र स्थलहरु मा जाएँ र तपाईं चुप, शांति र दक्षिण भियतनाम को प्रकृति को सबै सुंदरता को सम्वन्धन चाहते हो, समुद्री तट मा जानुहोस्। यहाँ तपाईं क्रिस्टल साफ़ पानी को आकर्षण सजिलै संग, सफेद सैंट को चमक, आकाश को समर्थन को खजूर को पेड संग एक प्राचीन उष्णकटिबंधीय प्रकृति। यो तटमा सबैभन्दा सुन्दर स्थान हो। यहाँ प्रकृतिको सौन्दर्य रमाइलो हुन सक्छ र साथसाथै ताजा पकडिएको समुद्री खाने प्रयास गर्नुहोस् - शिलफिश, लोब्रेस्टर, चिन्ता र गोलाहरू मछुआरे द्वारा प्रदान गरिन्छ, जसले व्यक्तिगत रूपमा तिनीहरूलाई समुद्रमा पकड्यो।
तम्बू कसरी छनौट गर्ने?
विश्वका होटलहरूमा सबैभन्दा असामान्य सेवाहरू
निमन्त्रणा द्वारा भिसा स्पेन
ताशकन्द - आकर्षण
Crimea को सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य रिसोर्ट्स
Mogilev मा रेस्टुरेन्ट
1 दिनको लागि मस्कोमा के देख्नुहुन्छ?
Petrozavodsk - पर्यटक आकर्षण
सेप्टेम्बरमा रूसमा आराम गर्ने कहाँ छ?
डिज्नील्याण्ड कहाँ छ?
पर्यटन को लागि टाइटेनियम वेयर
खुला मैदानको लागि टमाटर किस्महरू
दूधशैली कसरी घरमा बनाउने?
शाही जेलीसँग हनी - उपयोगी गुणहरू
कुखुराको साथ चिकन - नुस्खा
पार्सले - उपयोगी गुणहरू
आन्तरिक भित्र ईंट
दुखाइ बिना नियमित पेशा
हातमा स्नीकरहरू कसरी धोएर?
साङ्गीतिक र काल्पनिक खेलहरू
टैटू भाइ Miley साइरस को कमीज को आवश्यकता छैन
गृहकार्यको लागि कार्यक्रम
डाइमेक्सिड संग बाल विकासको लागि मास्क
कोट पूरा - पूर्ण आकारको लागि स्टाइलिश मोडेल कसरी छनौट गर्ने हो?
चमडा तल जैकेट संग फर
व्यापारिक अलमारीको बारेमा 10 रोचक तथ्यहरू
स्तनपान संग सोरल
Aquarium को लागि एलईडी Downlight
राक्षस वा पीडित: डा। लूकाले केशूलाई बलात्कार गरेनन्
दाँतका लागि पिसाब पिसाब